Ganacsato Soomaali ah oo lagu dilay rabshadaha ka socda Koofur Afrika – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ganacsato Soomaali ah oo lagu dilay rabshadaha ka socda Koofur Afrika
Ilaa afar qof oo Soomaali ah ayaa lagu dilay qeybo ka tirsan gobolka Kwa-zulu Natal ee ay ka socdaan dibadbaxyada rabshadaha wata xilli madaxweynaha Koofur Afrika, Cyril Ramaphosa, uu shacabka dalkaasi ugu baaqay inay joojiyaan rabshadaha isla markaana ay si adag uga soo horjeestaan kuwa uu sheegay inay dalka fowdo u horseedayaan.
Dhanka kale waxaa jira warar sheegaya in milateriga Koonfur Afrika loo daadgureeyay degmooyinka qaar si ay gacan uga gaystaan xakamaynta qulqulatooyin iyo boob maalintii shanaad ka soconaya dalkaasi, kuwaas oo ka dhashay xabsiga loo taxaabay madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma.
Jacob Zuma ayaa todobaadkii hore waxa uu bilaabay 15 bilood oo xarig ah oo loogu riday inuu ka dhaga adaygay amar maxkamadeed.
Haddaba xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkaasi Koofur Afrika, ayaa waxaanu ka wareysannay Cabdullaahi Macow Cawaale, oo ku nool Durban, gobolka Kwa-Zulu Natal.